I-turkey ehlanganisiwe, iresiphi kaKhisimusi | Ukupheka Kwekhishi
Kulezi zinsuku ezikhethekile sikulethela iresiphi kaKhisimusi, a I-turkey ehlanganisiwe ejwayelekile kakhulu yalezi zinsuku. Ukukhuluma iqiniso, ngangingakaze ngibe nesibindi sokwenza lesi sidlo ngoba sibonakala sikhulu kakhulu futhi ngangicabanga ukuthi ngeke sibonakale sihle, kodwa ngemuva kwalesi sikhathi sokuqala ngiyakuqinisekisa ukuthi ngizokwenza kaningi. Ilula kakhulu kunokubukeka njenge-priori futhi inhle impela. Sonke sikuthandile!
Uma ungatholi i-turkey engenamathambo futhi ufuna ukwenza iresiphi, qhubeka uzithambise ngokwakho. Lapha ungabona indlela ithambo turkey ngendlela elula.
Le turkey egxishiwe iyisidlo esinamandla kakhulu, ngakho-ke kufanele ihambisane nesidlo esilula njenge- Ikhekhe le-Salmon ne-shrimp noma a Isaladi leShrimp.
1 Izithako (ama-servings ayi-8)
2 Ilungiselela iTurkey yokugxila
3 Yenza ukugcwaliswa
4 Izinto ze-turkey
5 Bhaka i-turkey
6 Phrezenta i-turkey egxishiwe
Izithako (ama-servings ayi-8)
I-turkey engu-1 engenalutho
1 ingilazi ye-port wine ne-cognac (exubile)
1 anyanisi omuhle
5 amasoseji enyama
4 tincetu teshubby yebhekeni
Ama-prunes ayi-18 afakwe ku-cognac
Ama-apricot ayishumi omisiwe afakwe ku-cognac
50 gr. amantongomane kaphayini
1 ucezu lwe-truffle, oqoshiwe
1 ingilazi yePort
100 gr. umlimi unamathele ku-cognac
Ezinye izinto ezidingekayo
Ibhulashi lasekhishini (kunconyiwe)
Ungakhohlwa cwilisa omisiwe namabhilikosi omisiwe ku-brandy encane.
Ilungiselela iTurkey yokugxila
Into yokuqala okufanele siyenze ukususa zonke izimpaphe ezisele ku-turkey kahle futhi sihlanza kakhulu kahle Kokubili ngaphakathi nangaphandle. Zama ukushiya isikhumba sentamo esanele ukuze usisebenzise kamuva ukuvala i-turkey. Nonga iTurkey ngosawoti nopelepele bese uyicwilisa ngePort. Singasebenzisa ibhulashi lasekhishini ukusisiza.
Engilazini sincibilikisa ibhotela elincane bese silixuba ne-cognac ne-Port wine. Ngenhlanganisela sigcwalisa isirinji (uma kungenzeka sijiyile) bese sijova ingxube kuTurkey ukuze inyama iba ngethenda futhi kunambitheka kakhulu.
Sibeka i-turkey kuthileyi bese siyigcina efrijini ubusuku bonke.
Epanini lokuthosa sibeka uwoyela omncane nogalikhi. Lapho igalikhi ithosiwe, engeza amasoseji aqoshiwe nebhekoni namacube ham. Lapho ithosiwe kahle, siyibeka kupuleti.
Sihlanza i-pan bese sibeka omisiwe nama-apricot omisiwe (khumbula ukuthi kufanele uwafake ku-cognac kusengaphambili) bese uwathosa ngokushisa okukhulu. Uma sezithosiwe, engeza i-truffle eqoshiwe, amantongomane kaphayini, isinamoni, iparsley, usawoti, upelepele, uketshezi oluvela omisiwe namabhilikosi omisiwe abemanziswe nokuchithwa kwePort.
Faka inyama esiyigcine esinyathelweni esedlule epanini lamagilebhisi omisiwe nama-apricot omisiwe. Siyipheka imizuzu embalwa, siyixube kahle bese siyifaka ku-tupperware.
Sikufaka efrijini bese sikudedela kuphumule kuze kube ngakusasa.
Ngakusasa, sakhipha i-turkey efrijini kanye nokugcwalisa esasikugodlile.
Sifaka okufakwayo emathunjini aseTurkey.
Sivala i-turkey ngokuthunga ngenaliti ekhethekile nentambo yokupheka. Uma ungenayo intambo ekhethekile, sebenzisa intambo eyi-chubby kancane nenaliti ejiyile ukukwenza.
Sihlobisa i-turkey ngaphandle siyisakaze ngesinqumelo ngaphandle.
Sifaka i-turkey esitsheni no-anyanisi, utamatisi amabili aphelele (uma evuthiwe njengoba enikeza isosi ukunambitheka okungcono), iqabunga le-bay nesinamoni.
Sifaka i-turkey kuhhavini bese siyimboza ngephepha elingenamafutha noma ngephepha le-albal ukuze lingashi. I-turkey kufanele ibe kuhhavini amahora angu-3 cishe (kuya ngokuthi ingakanani iTurkey). Lapho i-turkey yenziwa ngaphakathi, sisusa iphepha lokubhaka esilimboze ngalo ukuze libe nsundu ngaphandle.
Ukwenza usoso kufanele uhlole ngezikhathi ezithile ukuthi i-turkey ungapheli usoso. Kuleso simo engeza amanzi noma i-port wine kanye ne-cognac uma kudingeka. Khumbula ukuthi kufanele kube nesoso esiningi ekugcineni.
Uma sekusele isigamu sehora ukuqeda sifaka amaprimomu afakwe emanzini kanye namanye amantongomane ephayini kusoso ukuze kwenziwe usoso we-turkey.
Phrezenta i-turkey egxishiwe
Uma sekwenziwe singathula lonke i-turkey esitsheni nososo nxazonke. Kuqoshwe ngqo etafuleni ngoba le ndlela iyamangalisa.
Singayisika futhi siyiphake emapuletini ngamanye ucezu lweturkey olufakiwe kanye nososo omncane.
Esinye isosi sikhonzwa esikebheni esihlukile sososo ukuze abadli bakwazi ukuziphakela ngokwengeziwe.
Ngososo singangeza u-anyanisi notamatisi basike babe yizicucu, basuse noma bachoboze. Ngishiye uhhafu wemifino oqoshiwe kanti enye ingxenye ngayiqoboloza ngesixubuzi, ngangeza kusoso ngayixuba ukuze ifane.
Ngiyethemba uyayijabulela lena. i-turkey enhle kakhulu, iresiphi ejwayelekile kaKhisimusi.
Imininingwane engaphezulu - Ungayithambisa kanjani iTurkey, Ikhekhe le-Salmon ne-shrimp, Isaladi leShrimp
Inyama Ungadliwa, Ukupheka kukaKhisimusi
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Inyama Ungadliwa » I-turkey ehlanganisiwe, iresiphi kaKhisimusi
UCarmen Gonzalez Garcia kusho
Le recipe icebile kakhulu, kubonakala kunzima kepha ayinzima kangako, kufanele ujabulise.
Phendula uCarmen González García
Siyakuhalalisela, ngemininingwane oyiphatha ngayo iresiphi! Bengicabanga ukwenza i-turkey eyakhiwe ekhaya esidlweni sakusihlwa kusasa se-Thanksgiving! Kepha ngokubona umsebenzi, sizoya kwimenyu etholwe ngumyeni wami ngoLwesihlanu, ekhetheke kakhulu ngenxa yosuku futhi bane-turkey nezitsha ezijwayelekile! Futhi futhi ngentengo enhle kakhulu, € 17,50!
Lokhu kugcwaliswa yi-cisco. Kusebenza kakhulu ukubeka konke okuluhlaza, okuboshwe neqanda: umgodi wesiphazamisi usebenza njengehhavini bese uthola uhlobo lwekhekhe elinjengebhola lombhoxo okulula kakhulu ukusika libe izingcezu ezincanyana noma ezijiyile ungahlala izinsuku ezimbalwa. Ngaphezu kwalokho, ngalokho okugcwaliswayo kukhishwa lapho kuphekwa, kudilizwa, isoso senziwa sodwa
Ama-noodle we-Wok ane-zucchini